အဆိပ် Archives - BuzzFeed Myanmar
အဆိပ် တွေ မစားပါရစေနဲ့
နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ စားသောက်နေရတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ သန့်ရှင်းဘေးဥပါဒ်ကင်းနေမှ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်လာမှပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ရှိမှသာလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ သွားလို့ရမှာပါ။စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဘေးဥပါဒ်တွေပါနေရင် အဲဒီလူမျိုး ရေရှည်ကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မပြောနဲ့။ သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ဖို့ပင် မလွယ်ကူတော့ပါ။
မနေ့ ညနေက မြွေဟောက် ကိုက်လို့ လူနာတစ်ယောက်လာတယ် ဆေးထိုးနေရင်း အသက်ရှူကျပ်တယ်၊ မောတယ်
မနေ့ ညနေက မြွေဟောက်ကိုက်လို့ လူနာတစ်ယောက်လာတယ်။
မြွေကိုရိုက်သတ်ပြီး လယ်ထဲမှာ ထားခဲ့တယ်။
ရောက်တော့ အဆိပ်တက်တဲ့ လက္ခဏာမရှိသေးဘူး။ မြွေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ သေချာမပြောနိုင်ဘူး။ မြွေဟောက်ဆိုတော့ အဆိပ်တက်တဲ့ လက္ခဏာပြတဲ့အထိစောင့်လို့လည်း မဖြစ်တော့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး(polyvalent)၄ လုံးထိုးတယ်။
အဆိပ်ပါဝင်နေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေက ကိုယ်ဝန်မရအောင်တားဆီးနေ
ကိုယ်ဝန်ရရှိအောင် ကြိုးစားနေတယ် ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံတွေ အပြင် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေလည်း ပြည့်စုံလုံလောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင် တွေက ရွှေကြောရှာဖွေ ရင်းနဲ့ ရွှေတွေ သီးနေတယ်လို့ ဆိုလို့ရတဲ့ Eucalyptus သစ်ပင်တွေ ကို မတော် တဆ တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအပင်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချ ကြမလဲ။ပုံပြင်ထဲ မှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း တွေကို အပင် တွေဆီက ခူးယူကြတာ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ ရှေးတုန်း ကလဲ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ ပဒေသာပင် ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောဖူးကြ ပါတယ်။ ကဲအခု ကတော့ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ အပင်တွေ အကြောင်းတော့ မဟုတ် ပေမယ့် ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ အကြောင်း ပြောပြမှာပါ။
လည်ပင်း ထဲက ထွက်နေတဲ့ အဆိပ်
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ သွေးထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ ဓာတ်စု ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ထိုဓာတ်စုတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပုံမှန်သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမယ့် လွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်သဘောမျိုးကို ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့ လည်ပင်းကဓာတ်တွေ လွန်ကြူးစွာထွက်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘေးဒုက္ခဖြစ် စေတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
*ကိုယ်သောက်မည့် ကော်ဖီခွက်ထဲကိုအဆိပ်ခတ်၍ မသောက်မိကြပါစေနဲ့
*Coffee Mix ဖျော်ဖို့ ဇွန်းမရှိရင်ဒါမျိုး လွယ်လွယ် မလုပ်လိုက်ပါနဲ့..
ညသိပ် ရေနွေး အဆိပ် ဖြစ်စေလား??
ညသိပ် ထားတဲ့ ရေနွေး ဟာ မြွေ အဆိပ် လိုပဲ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေတယ်လို့ အွန်လိုင်း ပေါ်မှ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်မှာ တွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူတွေများခဲ့တဲအတွက် တစ်ညသိပ်ထားပြီးသား ရေနွေး အကျန်ကို ပြန်သုံးတာ ပြန်သောက်တာဟာ အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ လူအတော်များများ စွဲလန်း မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
အားလုံး သတိထားရမည့် ကော်ဖီ ခွက်ထဲက အဆိပ် …!
ကိုယ်သောက်မည့် ကော်ဖီခွက်ထဲ ကို အဆိပ်ခတ်၍ မသောက်မိကြပါစေနဲ့ ။ Coffee Mix ဖျော်ဖို့ ဇွန်း မရှိရင်ဒါမျိုး လွယ်လွယ် မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ။ တစ်ချို့သော ပစ္စည်းတွေက အပူနဲ့တွေ့ဆုံ